Human X Ray sawirka, Veterinary X Ray sawirka, X Ray sawirka - HD
Naga soo wac: + 86-311-66575023
HD Medical waxaa la aasaasay on 2000, waa shirkad teknoolojiyad sare oo cusub kuwaas oo ku takhasusay cilmi & horumarka, wax soo saarka, iibka iyo adeegga iibinta dib imaging caafimaad alaabta qalabka. HD Medical ayaa maray shahaado nidaamka maareynta ISO caalami ah 9001 iyo ISO 13485 oo tayo leh, waxa uu leeyahay 20 nooc oo ah hantida aqooneed ee shahaadooyinka patent midig.
waxyaabaha lagu kala qaybiyay taxane DR Medical iyo taxanaha Animal DR. The taxane DR caafimaadka waxaa ka mid ah go'an style DR taxane, Mobile DR taxane, raajada sariirta guri DR taxane, taxane DR qaadan karo, sariirta guri DR taxane Dynamic, baska baaritaanka jirka iyo wixii la mid ah. taxane Animal DR ka mid ah dhamaadka High Butros DR, Simple oo si sahlan Butros DR, adeegga update DR, Butros X-ray qalabka, ultrasound midabka xoolaha, caafimaadka xoolaha MRI, Veterinary taxane qaliin sariirta iyo mashruuca ilaalinta iwm Waxaan sidoo kale soo saaraan labada nooc oo qayb Farsamoyaqaan DR DR.
U hubeeyo nidaamka imaging raajada ray DR digital X
gacanta UC DR digital X imaging ray raajada Mac ...
sariirta Flat DR digital X imaging ray raajada ...
Mobile DR digital X ray imaging raajada Dev ...
Maxaad kala dooran our HD Medical?
R Gaarka ah & D kooxda kaliya ee qalabka sawirka caafimaad, DR, CT, MRI, Ultrasound.
Laga bilaabo sannadkii 2000 inuu diirada saaro soo saaridda iyo dayactirka qalabka sawirka Medical.
shahaadooyinka hore u leedahay of CFDA / ISO9001 / ISO13485, shahaado CE codsanaya.
awoodda-saarka Strong iyo nidaamka maareynta adag si loo hubiyo in bixinta degdeg ah oo joogto ah.
xayawaanka xoolaha analog xoolaha sy X ray imaging Portable ...
KPET DR3500 xayawaanka rabaayada ah Veterinary Radi digital ...
KPET DR5500 xayawaanka rabaayada ah Veterinary radio digital ...
KPET DR6000 xayawaanka VET xoolaha raajada digital ...
HD Medical waxaa la aasaasay on 2000, waa shirkad teknoolojiyad sare oo cusub kuwaas oo ku takhasusay cilmi & horumarka, wax soo saarka, iibka iyo adeegga iibinta dib imaging caafimaad alaabta qalabka.
Wax soo baara Liiska Price
Shijiazhuang HD Technology Medical co., Ltd
Alasdair (Africa Furka)